DataNumen: Fijoroana ho vavolombelona
Alefaso eto ny fijoroanao vavolombelona
Ramatoa Mascha Fujimoto nisotro ronono
Arizona, Etazonia 16 martsa 2021
Seattle, Etazonia 12 martsa 2021
David Roper Tale misahana ny hopitaly misotro ronono
Blythewood SC, Etazonia 3 martsa 2021
Injeniera misotro ronono Antonis N.
Patras, Gresy 27 feb 2021
e-automatyk ul. Leśna 17C, 62-006 Gruszczyn Dec 23th, 2020
Craig miasa irery
Víctor Ramón RG Asa an-trano
Leioa, Bizkaia, Espana 30 septambra 2020
Lucy Gold Scientist efa misotro ronono
Paris, France 21 septambra 2020
Texas, Etazonia 1 septambra 2020
Borsbeek, Belzika 30 Aogositra 2020
Los Angeles, CA, Etazonia 17 Jolay 2020
Nandany adiny 5 aho androany nitady tranokala nanolotra Outlook Password Recovery maimaim-poana na tsy lafo. Hitako ihany tamin'ny farany DataNumen mifanaraka tsara amin'ilay faktiora ho an'ny filako indray mandeha! Mora ampiasaina ary miasa toy ny hatsarana. Misaotra anao nanamaivana ny fahasosorako nandritra ny ora maro!
Houston, Texas, Etazonia 15 Jolay 2020
Misotro ronono i Cavan McDonald
St. Albans. UK Jolay 9th, 2020
Fanjakana anglisy 2 Jona 2020
Pete M. Misotro ronono
Calgary, AB, Kanada 8 Mey 2020
Niezaka nanokatra arisiva misy sary taloha aho, saingy tsy afaka, noho ny lesoka sasany. Avy eo nampiasaiko DataNumen Zip Repair ary nanao ody io. Faly aho fa azoko ny sariko. Misaotra anao amin'ny vokatrao!
Romania 22 aprily 2020
Ken Mantey fahazavana GE Retiro
Chesterland, OH, Etazonia 8 aogositra 2019
Vao nanandrana ny fanarenana tenimiafinao .pst.
Misaotra anao indrindra.
Hanoratanao marika ny tranokalanao raha sanatria ka mila mividy vahaolana omenao izahay.
Mahomby fotsiny, izay midika hoe mahafinaritra. Misaotra betsaka, indrindra satria raha tsy izany dia tsy ho vitako ny nahazo ara-batana ireo rakitra tsy maintsy namboariko, noho ny fanidiana hidy misy covid-19. Hanely am-bava tena tsara momba anao aho.
Milan, Italia 16 martsa 2020
Salama. Manandrana ny lozisinao aho hanamboarana angon-drakitra sql. Rehefa avy nihazakazaka ny fitaovanao aho dia afaka mahita ny antontam-baiko rehetra indray 🙂
Desambra 13th, 2019
Misaotra anao nanampy! Tena gaga aho tamin'ny fomba niasa.
Texas, Etazonia 8 Novambra 2019
APP LEHIBE! TENA TSARA! MISAOTRA BETSAKA.
Septambra 2nd, 2019
Misaotra noho ny fitaovanao, manampy ahy tanteraka amin'ny fanamboarana ny fisie Excel.
Misaotra betsaka. Eny tokoa, ny vahaolana fanarenana atiny rakitra MS Office no tsara indrindra notsapaiko hatramin'izao.
Tale teknika Tomasz Warmuz Landis + Gyr Poland Sp. z oo
Poznań, Polonina 20 Mey 2019
Misaotra anao amin'ny zipfanamboarana. Rindrambaiko tsara izy io hanamboarana ny zip hametraka.
Roma, Italia 10 aprily 2020
Asheville, NC 10 Mey 2019
Miarahaba anao aho noho ny DOER anao izay rindrambaiko tokana nanandramako afaka mamerina amin'ny laoniny izay dbx maloto nataoko.
France 23 aprily 2019
Durban, Afrika Atsimo 18 Febroary 2019
Famerenana amin'ny laoniny. Tena tsara
Ambernath, India 15 Janoary 2020
Reparador de tablas FoxPro, fantaosy
Moskoa, Russia 29 aprily 2019
Seho rindrambaiko tsara. Manao izay voalaza ao, ary amin'ny fomba tena sariaka amin'ny mpampiasa ...
Governemantam-paritra mpanao mari-trano Ricardo Freitas
Funchal, Portugal 27 Jolay 2019
Peter Keating ex CIO, efa misotro ronono izao
Melbourne, Aostralia 15 Jolay 2019
Fandaharana tsara hamerenana amin'ny laoniny ZIP tahiry. Manoro hevitra aho ... ary tsotra toy ny varavarana.
Bohdan Sheretiuk Retirety Marketer SS-service
Lutsk, Okraina 27 Oktobra 2019
Abdellatif FAJR Jeneraly fangatahana mpandrindra ankapobeny
Casablanca Morocco 10 Desambra 2019
Fitaovana tena lehibe ary mandeha tsara. Fitaovana fanarenana data
Mandip Kanjiya CEO & mpanorina ny Hey Flyer http://www.heyflyer.com/
Febroary 11, 2020
Auckland, Nouvelle-Zélande 18 Febroary 2019
Mpampiasa solosaina Peter Jones Home
Adelaide, Aostralia 27 Jona 2019
Auckland, Nouvelle-Zélande 23 Aogositra 2019
Izaho dia nanana rakitra rakitra rakitra izay misy lesoka tokony hamboarina, ny tranokalanao dia nanamboatra ny rakitra teny tao anatin'ny 6 minitra.
Miavaka ity ary tena tsara.
Injenieran'ny Physicist Valentin Bogatu https://helpwithphysics.com
Romania 4 septambra 2019
Ilaina ny famerenana amin'ny laoniny ny rakitra backup Windows XP. Nahagaga ny rindrambaiko nataonao ...
Hanoro hevitra mazava aho!
Eric Seeds Administrator IT Cable Laboratoara Teknolojia www.cabal.com
New Brunswick, NJ, Etazonia 8 Janoary 2020
Italia 7 martsa 2020
Misaotra anao! Nandaitra izany.
Manoro anao anao aho ho an'izay mila sitrana a Tar hametraka.
Huntsville, Alabama, Etazonia
Niasa tsara ny vokatrao.
Eugenio G. Bahamondes M.Ss. Senior Electrical Engineer
Misaotra betsaka tamin'ny nanoloranao ny kinova demo ho an'ny olona toy izany
amin'ny maha mpisotro ronono ahy (iray amin'izy ireo aho).
Brian Willis Freelance fandikana sy ny fampandrosoana ny tranokala
Carletonville, Afrika Atsimo
Farany - vokatra manao izay lazainy miaraka amin'ny fomba tsy misy hadalana sy ny vokatra mahafinaritra. Vita tsara! Maniry aho fa hahita ny vokatrao alohan'ny handaniako ny volako amin'ireo be sandoka any.
Mpanjifa tsy fantatra anarana
DZIPNahavita fahagagana i R & nahazo sary nomerika an-jatony MB izay noheveriko fa ho azokoost mandrakizay.
Amboary ny be - Mpamonjy aina!
Vao avy nahazo sary 1GB eo ho eo Zip raki-daza. Nihevitra aho fa tena tototry ny entana fa DZIPR vao niasa ny zava-drehetra tamin'ny maody batch. Tsy very sary iray akory aho. Tena tsotra & haingana ampiasaina koa. Tsy afaka manome soso-kevitra azy io ampy.
Ny ezaka ataoko amin'ny DOER dia 100% ankehitriny.
Nanohana rakitra vitsivitsy aho a Zip fisie avy amin'ny kahie Mac G4-ko. Tsy nanan-tsafidy aho afa-tsy ny mamerina azy ireo amin'ny PC, ary amin'ny fanandramana unzip, Hitako fa tsy nisy afaka nanokatra arsiva 10.2 GB simba. Avy tao amin'ny skeptisim aho dia nandefa an'i DZIPR, ary hitako fa afaka manamboatra ny fisie-ko ity, dia nandeha aho ary nandidy ny hanala ny fetran'ny kinova andrana. Nihazakazaka indray aho, ary raha namboatra izy io, tsy vitan'ny hoe nanangona angon-drakitra vitsivitsy fotsiny, fa nahatratra azy rehetra! Faly be aho fa ny Tech Support dia namaly haingana ny mailako, ary tena nanampy be izy ireo (nanova ny hevitro manohana ny fanohanan'ny teknolojia lozisialy) Misaotra tamin'ny fampiasana ilaina toy izany. Misy drafitra ho an'ny kinova OS X ve ato ho ato?
Taorian'ny fanamboarana ny batch, ny rakitra rehetra dia namboarina tamim-pahombiazana ary mivoaka amin'ny mac amin'ny alàlan'ny windows PKZip ary SaMBa Network Drive izay misy sarintany. Tsy maintsy asongadiko fa tena faly aho fa mandeha tsara ny vokatrao, ary nahafinaritra ny fanohanana
Miarahaba, ary misaotra hatrany
MISAOTRA! Namboarina sy notahirizina tamina flash drive alohan'ny nandroahako ny IE sy OE !!!
Vokatra tena tsara !! Nisalasala aho fa vao tafarina ilay backup zip an'ny arisivan'ny mailaka nataoko ary niova fo aho 🙂
Misaotra betsaka ary arahaba indrindra
mahafinaritra ahy izany ary mieritreritra aho fa hividy azy
Miasa tsara. namonjy ahy antontam-potoana fa tsy ny fisintomana ilay rakitra avy amina loharano hafa satria simba ny fisie, ity programa ity no manamboatra azy. Fandaharana tena Mamiratra !!!!!!!! *****
Nitady toerana hanaovana post deraina fa tsy mahita na inona na inona. Tiako ny manampy ny hafa izay tafiditra anaty olana amin'ny mpanao kolikoly zip rakitra. Izaho dia niasa tamin'ny PC hatramin'ny 1982, talohan'ny IBM na Microsoft ary ity no programa voalohany niasa haingana, mora sy mahomby.
Niasa Lehibe izany.
Mora ihany koa.
Ny vadiko no nanao ny zavatra rehetra.
Soa ihany fa nanana ny fisie dbx rehetra tamin'ny back-up aho tamin'ny 19 Nov ary ny sisa dia mbola tao amin'ny mpizara mailaka, ka raha vao namboarina aho dia nisintona mailaka 95, saingy teo daholo izany.
Mora azo ny vola 50.
Tsy mbola nanana aho zip programa fanamboarana izay mandeha.
Ity dia nanao!
nanana lalao maro aho, ary karazana rakitra hafa izay efa nanao kolikoly, ary talohan'ny nahitako an'ity programa ity dia nanakorontana ny solosainako, ity no iray amin'ireo programa tsara indrindra nampiasako, ny hampita izany amin'ny namako.
Nety tsara izany! Misaotra anao indrindra! Namonjy ny ekipako ianao
hiverina hanao asa 16 volana indray. DZIPR mendrika izany
30 $ no laniko!
Nanandrana vokatra marobe aho tamin'ny fikatsahako sitrana a Zip fisie izay nahitana arsiva e-mail feno iray taona nefa tsy nahomby, mandraka ankehitriny. Notsongaiko ny kinova D an'ny DZIPR ary nahazo famporisihana tamin'ny tatitra momba ny fanarenana aho ka nanambola ny vola kely ary nisintona ny kinova feno.
Ny nahagaga ahy dia tsy nahomby tamin'ny famerenana ny rakitra nataoko ny vokatra feno ka nifandray tamin'ny fanohanana aho tamin'ny fanamboaranazip-files.com. Nangataka ireo lozam-pifamoivoizana avy amin'i D ireo solontenan'ny Tech SupportZIPR ary rehefa avy nandinika tsara dia nanolotra fomba iray hanandramako. Nandaitra!
Ity vokatra ity sy ny fanohanana ara-teknika tena tsara an'ny orinasa dia namonjy firaketana tena lehibe izay noheveriko fa lost tsara. Misaotra anao!
Sary 3GB vao voavonjy! Nahazo sary ny fizarana diplaoman'ireo mpianatra sy ny sakaizany! Misaotra anao.
Soso-kevitra: fahaiza-manao lisitra inona ireo rakitra tsy voatahiry?
Ny antontan-taratasy OpenOffice namboarina dia toy ny manintona! Fehiloha lehibe ho an'i DZIPR!
Tsara be ity vokatra ity! Namonjy anay fotoana betsaka ianao. Mifandraisa aminay amin'ireo fampiharana hafa mety anananao.
Namboarina ny ratsy nataoko Zip rakitra, araka ny nampanantenaina.
Tsy nino aho fa handeha io, saingy mety. Tena ratsy izany fa tsy afaka manamboatra ACE ary RAR rakitra koa.
"Nandaitra tamiko io!"
Nanandrana azy tamina fisie iray simba avy tao anaty floppy aho ary niasa ho ahy. Tsy misy afa-tsy rakitra 5 amin'ny 40 no simba amin'ny diplaoma sasany.
Nahazo ny simbaiko rehetra *.zip raki-daza. Ny olana tokana dia hoe nisy olana tamin'ny *.zip fisie izay izy ireo ihany zipped. Raha tsy izany 10 amin'ny 10!
Misaotra. Niasa tsara ny vokatra.
Misaotra betsaka noho ny mailaka mailakao.
Efa nanandrana an'ity aho ary niasa toy ny nofinofy ny zava-drehetra!
Misaotra betsaka, tafarina tamin'ny 900 MB mahery aho!
Vao avy nividy sy nampiasa DOER aho hamerenana ny iray amin'ireo rakitra .dbx mpampiasa ahy izay mihoatra ny 2GB. Nahomby izany - misaotra tamin'ny vokatra tena ilaina.
Manana vokatra feno aho, manampy ahy manamboatra rakitra 300MB izany
OAY! Namonjy ahy ora 2 sy fotoam-pitsangatsanganana hamaky ny tanàna ianao. Misaotra!
Mamelombelona ny mahita programa mahasoa tsotra eto izay tena miasa! Nandramako izany tamin'ny eritreritra tsy dia nieritreretako hoe mety izany. DZIPR atsofohy aho!
Salama ry tary,
Sahirana be aho amin'ny fahazoana mailaka 4 taona avy amin'ny kapila mafy nianjera nataoko nandritra ny herinandro lasa izay.
Nampiasa ny kinova demo an'ny DOER - tsy mahavita ny fitsarana feno izany !! Ny kinova feno dia nahatratra 100% ny mailako - rindrambaiko mahafinaritra ihany koa - lafo ihany koa.
Mamerina ny fisaorana anao,
"ENY MAMONJY NY lesoka CRC: D"
Most amin'ny fotoana tokony hikororohana ny anao tsotra raha misintona a zip rakitra ary manana hadisoana crc, indrindra raha ny zip Ny rakitra dia tsy misy afa-tsy fisie ISO. Ity vokatra ity dia nametraka ny lesoka CRC tao amin'ny zip apetraho amiko ny rakitra ISO fa tsy misy lesoka!
Tena programa tena tsara, ho an'ireo olona misintona rakitra sfx be amin'ny internet izay simba dia atoroko an'ity rindrambaiko ity! manamboatra zip tsara be ny rakitra sy ny rakitra sfx! saingy mieritreritra aho fa mila mahay manamboatra ity rindrambaiko ity rar fisie koa 🙁
Tsara ny mikasika!
Misaotra, nahomby. Vokatra tsara - mpamonjy aina tokoa!
Izany mihitsy! Azonao atao ny mampiasa ny fizarana voalaza ao amin'ny tranonkalanao na ny literatiora promo. Manomeza fanampiana ahy ary amboary ny fanovozan-kevitra CRC, satria ny CRC sy ny Cyclic Redundancy dia lesoka mitovy. Raha mila dera bebe kokoa ianao, androany, nahazo fanavaozana tamin'ny alàlan'ny mailaka aho ho an'ny fampiasana shareware izay misy a CAB mametraka ao a Ziprakitra. Mandresyzip, PKZip & WinAce dia nitatitra fa maloto ilay rakitra ary tsy azo nosokafana. Nihazakazaka namakivaky an'i D ahoZIPR ary tsy vitan'ny ny zipamboary ny rakitra fa ny fonony CAB Ny rakitra dia byte marina ho an'ny lalao byte amin'ny cabrakitra ilaiko amin'ny fanavaozana. Toa io D kely ioZIPR Gem dia zavatra tokony aloan'i Microsoft. Mamerina ny fisaorana anao,
North Carolina, Etazonia
Ianao dia hahazo ny vatoko amin'ny alàlan'ny fampiasana PC tsara indrindra. Hatramin'ny nividianako an'i DZIPR, imbetsaka aho no nampiasa izany tamin'ny fisie izay mampiseho CRC ratsy na nanana olana hafa nahatonga ny fandresenazip na WinAce hanidy ary hampiato ny fikarakarana. DZIPR dia nametraka izay rehetra nariako tamin'io. Mahatalanjona sy kanto tokoa ny fikirakirana rindrambaiko.
Fandaharana tena mahafinaritra. Sorta 'a "no-brainer" izay tiako.
Lehilahy base data aho ary tena aleoko mampiasa Foxpro toy izay spreadsheet Excel.
Saingy tsy mandeha amin'izany ny fiainana rehefa miara-miasa amin'ny olon-kafa ianao.
Raha tsy mandeha ny programa nataonao dia tokony nanamboatra fanamboarana tanana izahay sy ny namako tamin'ny fampiasana mpijery hex na ASCII ary nanitsy ny binary mba hamahana ny kolikoly. Taratra inona izany.
Tsy izany no nitranga. Ka asa tsara no lazaiko ary hahazo ny vatoko sy ny PR ho avy ianao.
Mamerina ny fisaorana anao. Mendrika ny vola.
Rick Fayter Database Consultant
Misaotra anao fotsiny aho. Nividy aho DataNumen Zip Repair latsaky ny
adiny roa lasa izay ary nety tsara !!! Ny zavatra niainako dia azo fintinina ao
NAMONJY NY ASANAO!
Serivisy informatika Ardor
Raha ny marina dia hitako ny vahaolanao tao anatin'ny 10 minitra voalohany!
Na eo aza izany, na dia tamin'ny voalohany aza dia nieritreritra aho fa vola be no laniana amin'ny programa kely iray, DataNumen Access Repair sitrana angon-drakitra toy izao ka faly tokoa aho izao 😉
Izay rehetra an-tserasera
Wow ny rindrambaiko ataon'olom-bitsy dia nampidina ny rindrambaiko fitsapana aho ary afaka nampiseho tamiko ireo latabatra rehetra izay ananako marina. Ity vatolampy rindrambaiko ity dia manambola ary nanampy ahy be dia be.
manana fanamboarana mialoha
Ampidiriko indray ny programa feno & ireo angon-drakitra fanamboarana rehetra alefako amin'ny comp. Amin'izay dia miasa tsara ny programa ary manamboatra 91% ny kapila misy ahy !!!
Namonjy alm ahoost, ny angon-drakitra manan-danja rehetra !!!
Misaotra ny programa DZIPR! Miasa tsara!
Nividy aho DataNumen Outlook Express Repair ary sitrana soa aman-tsara ireo fisie ao anaty fampirimako izay nanjavona tamin'ny lisitry ny OE. Ny vokatrao dia niasa tsara; Misaotra anao.
Fanamarihana fotsiny mba hampahalalana anao fa niasa tsara ilay programa etsy ambony ary sitrana soa aman-tsara aho almost Mailaka 3000 izay nofafako tsy nahy tsy nahy. Tsy hisalasala hanome izany amin'ny mpiara-miasa sy namana aho.
Nanampy betsaka ahy ny logiciel anao, misaotra misaotra misaotra betsaka !!!!!!!!!!
Te hampahafantatra anao fotsiny aho DataNumen DBF Repair afaka namerina ny angon-drakitra rehetra avy amin'ny ACT anay! Database 2000.
Tale mpamokatra Stephen Rice
Nanandrana vokatra telo hafa aho talohan'ny nahitako Advance Outlook Express Recovery. Ny roa amin'ireo fandaharana dia nahita ny hafatra rehetra, na izany aza, ireo hafatra dia tsy nisy data tao amin'ny vatana. Ny fahatelo dia tsy nahita ny mailaka efa nisy akory. Ny andrana voalohany miaraka amin'ny Advance Outlook Express Ny fanarenana dia nampiseho ny rakitra rehetra tamin'ny fotoam-pitsarana. Nividy ny vokatra aho ary ny hafatra rehetra azoko dia azo sitrana avy hatrany. Ity dia vokatra mahafinaritra ary mendrika ny vidiny tokoa.
Rockwall, TX, Etazonia
Tena nandaitra izany. Misaotra anao nanampy.
John sy Connie
Hi. Vao nividy ny programa nataonao aho, ary nanamboatra zava-dehibe izany ZIP rakitra. Misaotra anao.
Nividy ny rindrambaiko nataoko omaly aho hamerenana 7GB tar rakitra izay ny lahatahiry "Documents and Settings" iray manontolo avy amin'ny solosaina findainy izay mandeha am-panaovana serivisy. Ny sasany amin'ireo antontan-taratasy dia * manan-danja indrindra * toy ny angon-drakitra Quicken, faktiora ho an'ny orinasako, ary ny famintinana ny fanomanana hetra ho an'ny kaontiko.
Ny kinova freebie dia nampiseho fa afaka nanamboatra izay rehetra ilaiko izyost, ka novidiko sy nosoratako ilay rindranasa. Rehefa nitantana azy aho dia namonjy an'i Docs_fixed.tar, ary nihazakazaka aho *tar xvf * eo amboniny. Maty tamina lesoka izy ary maty most ny atiny.
Na izany aza, naveriko indray ilay tar manafatra amin'ny adihevitra filename mba hitrandraka fotsiny ireo izay nahaliana ahy (ny "Finances" iray manontolo
lahatahiry), ary avy tamin'Andriamanitra, nahatonga azy rehetra tao anaty toe-piainana tonga lafatra.
Te-hisaotra fotsiny aho. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao. Raha misy azoko atao ho anao amin'ny ho avy (harona voankazo amin'ny Krismasy, sasao ny fiaranao, alao ny fanasananao, ny firaisana ara-nofo) Manana trosa aminao aho, ny orinasanao ary ny rindrambaikoo.
Tora-bato ry zalahy.
Kevin Smith Electronics Designer, Farmer, Electriciel, Musician
Misaotra anao nanampy. Tena faly aho tamin'i DZIPR.
Sary manoloana ny sary
Nanana 800 MB aho zipfisie miaraka amina 97,00 noforonina tao Solaris izay nahazo lesoka tamin'ny "dir dir". Raha vantany vao niseho izany dia tsy afaka niditra mihoatra ny ~ 30,000 voalohany sy ny fenitra aho zipamboary ny fitaovana ampiasaina ao amin'ny pkzipc sy MandresyZip tsy _tsy nisy nanampy.
Tena nahasosotra ahy izany satria fantatro ny most na mbola tao daholo ny fisie rehetra - hadisoana tsotra izao tao amin'ny "lisitry ny atin'ny" arisiva.
Izaho no taloha DatanumenDZIPR hamerenana amin'ny laoniny 98% ny fisie ao amin'ny arisiva! Faly aho fa nahita orinasa toy izany Datanumen miaraka amin'ny fahaizana mamoaka ireo zavatra tsara ao amin'ny arisiva, indrindra rehefa simba ny dir dir.
Cleanscape Software International Albuquerque, NM, Etazonia
Raha ny fanazavana, tsara ny vokatra. Mamela ny fisaorako an'ireo lehilahy nanamboatra fitaovana tena ilaina aho.
Tena namaha ny fanahiko izy ireo.
São paulo, Brezila
DataNumen Excel Repair nitahiry ny andro ary nahazo ny angon-drakitra nilaiko tamin'ny fisie maloto. Mora be ny mampiasa azy, niasa tsara ho an'ny filako izy, ary tena amporisihiko ianao!
E. Madsen Lehiben'ny injeniera
PIN Technology, Inc. New York, NY, Etazonia
Misaotra niverina tamiko. Efa nividy ilay rindrambaiko aho ary nahazo ny rohy hampidinana ny rindrambaiko avy hatrany. Nametraka azy aho ary nety tsara!
Nahavita araka ny notoroanao aho dia niasa! Misaotra anao nanampy ahy haka ny asako 10 taona !!
Perth, Andrefan'i Aostralia
Ry DataNumen Staff
Misaotra anao nanao "DataNumen PSD Repair". Efa antitra aho
rakitra izay efa notazomiko hatramin'ny 2000. Noforonina tao amin'ny
PhotoDeluxe, amin'ny dikanteny PDD dia tsy afaka namaky i Photoshop.
Tsy fantatrao akory ny hafaliako tamin'ny fijerena indray, fampidinana ary fahombiazana
Avereno jerena ity rakitrao ity.
Hillsborough, NY, USA
Nevernind - nahazo izany izao, tonga tamin'ny alàlan'ny mailaka ihany koa ny rohy ary niasa ilay iray.
Marietta, GA, Etazonia
Nety tsara izany. Misaotra anao!
Injeniera Justin Moss Applications
Metton America, Inc. Houston, TX, Etazonia
Nahita ny fitaovanao aho tamin'ny fampiasana tranokala http://rmse.awardspace.com ary tiako ny milaza fa mahafinaritra ny fitaovanao amin'ny fisongadinana maro. Asa tena tsara. Raha manana lisitra mailaka na bilaogy ianao, dia midira azafady. Salam, JA
Namonjy ny Baconako! Misaotra!
Atlanta, Géorgie, Etazonia
Woonst BVBA Geraardsbergen, Belzika
Tsy maninona fa niasa! SOOO HAPPY aho! Misaotra betsaka amin'ny fanampianao rehetra! Afa-po 100% aho izao ary tsy hanelingelina anao intsony. tpt. MAMERINA NY FISAORANA ANAO!
Misaotra anao indray amin'ny fanampiana natolotrao, ary hatolotro an'izay rehetra manana olana mitovy amin'izany ity vokatra ity!
Andover, MN, Etazonia
Misaotra tamin'ny hevitrao.
Manana vokatra tena tsara ianao, namerina rakitra marobe ho ahy.
Arthur J Wehlow Manager Express Expressing Solutions
Port Macquarie NSW 2444, Etazonia
Nahomby aho nanangona angona.
Nihevitra aho fa tsy maintsy mahafoy ny angona rehetra ...
Tena ankasitrahako ny fanampianao, misaotra anao indray.
Novidiko androany ny anao Advanced Outlook Express Repair - Arahabaina, nahagaga tokoa ilay izy!
Hafa noho ny zavatra kely sasany, toy ny hazo shimerring mandritra ny asa fanarenana, na, ny fiheverana ny atin'ny rakitra Inbox dbx ho fisie 2 miaraka amin'ny mailaka mitovy amin'ny fotoana anaovany azy. Eny, nangataka tamin'ny lozisialy aho mba hamorona rakitra iray hafa misy e-mail voavonjy taorian'ny naharihary 2000 mailaka, saingy, antenaiko ny hahazo antontan-taratasy miisa 2 momba ny daty mailaka, fa tsy ny fisehoan-javatra hafahafa an'ny folder 2 miaraka amin'ny vanim-potoana mitovy mailaka ara-potoana!
Saingy, araka ny efa noresahiko teo aloha, zavatra kely ireo, ary ambonin'izany rehetra izany, reharehako ny asa nataon'ny rindrambaiko, ary azo antoka fa hanome izany ho an'ny namana aho.
Maniry anao hahita fahombiazana betsaka amin'ny famoronana & famoronana programa tahaka izany!
Misaotra betsaka, tso-po,
Torolàlana ara-panahy Yigal
Misaotra anao mamaly haingana sy feno. Nandeha ny vahaolana! Ny rindrambaiko Large File Splitter dia niasa, ary avy eo Advanced Zip Repair sitrana daholo ny rakitra!
Mpanjifa tena afa-po aho izao, ary faly manohy mampiasa ny vokatra. Misaotra anao indray, ary mirary tontolo andro lavorary.
Lakeland, FL, Etazonia
Nanana olana tamin'ny fisie 1.5GB outlool aho, nazoto be aho nefa ny AODR dia namaha ny olako ary nanampy ahy hamerina ny angon-drakitra rehetra, Misaotra betsaka Datanumen.com Ekipa izay nanampy ahy tamin'ny fisafidianana fitaovana mety ho an'ny olako.
Est. Jeddah Arabia Saodita
Misaotra anao tamin'ny valinteninao - mankasitraka ny fanampianao.
Raha ny marina dia nividy AOER aho omaly, sy ny lost mailaka azo averina !!
Toa miasa tsara i AOER, ary tokony hanamboatra ny olako OE rehetra!
Albuquerque, NM, Etazonia
Nanana lost mailaka manan-danja mandritra ny fizotran'ny fampifanarahana ary tsy nahalala ny fomba hahitana azy ireo na hanokatra azy ireo indray. Ny vokatrao dia namaha ny famoahana (farany).
Na izany aza, tokony hazavao amin'ny ludites toa ahy fa izay flikan'ny BAK dia azo ovaina anarana hoe DBX. Ny most Ny rakitra tsy mandeha notadiaviko dia ny anarany BAK (izay azoko angamba fa nitranga tamin'ny fizotran'ny fifanakalozana) ary nitaky iray andro fikarohana aho mba hahafahako manova ny anaran'ny rakitra ary avy eo mampihatra ny vokatrao hanao ny ambiny. Raha vantany vao nataoko fa nahomby ilay izy!
Nanana Gigabyte 60 izahay zip fisie izay tsy hisokatra. Advanced Zip Repair tsy afaka nanamboatra azy io satria lehibe loatra. Na izany aza, DataNumen nanome ahy rindrambaiko lehibe iray hafa whcih nizara ny rakitra ho rakitra Gigabyte 1 azo tantanana kokoa, ary avy eo Advanced Zip Repair amboarina soa aman-tsara ny tsirairay. Nanandrana vokatra isan-karazany fanamboarana hafa izahay nefa tsy nahomby, noho izany dia hiverina ihany aho DataNumen raha manana olana hafa momba ny angona isika amin'ny ho avy. Vokatra sarobidy sy fanohanana lehibe!
DataNumen Access Repair manangona angona betsaka kokoa noho ny vokatra hafa nampiasako. Nanampy ahy hitahiry tahiry maro izay simba izany. Tena faly aho nahita ity vokatra ity.
Davis, CA, Etazonia 16 Jiona 2015
San Diego, CA, Etazonia 15 Mey 2015
Tsy nanana olana tamin'ity fisehoan-javatra miavaka ity aho. Teny iray ho an'ireo olona izay mety nanana olana vitsivitsy. Raha ny 'DataNemen Rar Ny programa fanamboarana 'dia tsy mahavita manamboatra rakitra amin'ny tranga sasany, manandrama manamboatra azy amin'ny lahatahiry hafa _ lahatahiry amin'ny flash ivelany na kapila mafy mamela ny vokatra tsara indrindra ho ahy. Indraindray fotsiny aho no mila manao an'io, most amin'ny fotoana mety aminy.
Faly aho fa hiala amin'ny famerenako ny fifandraisako tsara amin'ny vokatrao _ toro-hevitra ihany koa momba ny tsy fahombiazan'ny 'DataNewmen' Rar Fanamboarana 'programa fanamboarana a rar rakitra. Hitako fa rehefa mitranga izany, ny fahombiazana amin'ny fanamboarana ilay rakitra resahina dia tratra hatrany amin'ny alàlan'ny famindrana azy any amin'ny lahatahiry hafa ary hamerenana ny asany any _ mazàna amin'ny flash na kapila mafy.
Raha mila manamarina ny fanombatombako ny vokatra amin'ny antsipirihako manokana ianao dia azonao atao ny mametra azy io amin'ny faritra _ 'United Kingdom'. MISAOTRA
United Kingdom 6 Sep 2014
Ry tsara ô, MISAOTRA! Tsy mino aho fa nahavita nanamboatra azy ianao! Efa nanandrana ara-bakiteny ny zavatra hafa rehetra aho - mahagaga izany, ary feno fankasitrahana aho.
Misaotra anao indray tamin'ny fanampianao! Faly aho manoratra fijoroana vavolombelona raha mila izany ianao- tsy nisy olon-kafa afaka nanamboatra an'io !!
Etazonia 16 sept 2015
Tübingen, Alemana Sep 13th, 2018
Houston, TX, Etazonia 23 Mey 2018
Naperville, IL, USA Dec 4, 2018
ny fitaovanao no tsara indrindra vitako nanamboatra rakitra fidirana ho an'ny oniversite hampiasaiko manokana ary mankasitraka ahy
Santo Domingo, Repoblika Dominikanina 30 Dec, 2018
Toa niasa tsara ny programa nataonao rehefa nahafahako niditra tamin'ireo fisie
amin'ny windows explorer na programa arisiva.
Indray mandeha indray, misaotra anao tamin'ny fanampianao tamin'ny programa ary tiako izany
tsy misalasala manome izany.
Aostralia Jan 17th, 2019
Misaotra betsaka noho ny fanampianao sy ny fahaliananao Tsy mba nanana olana tamin'ny lafiny rehetra ianao.
Tena afa-po aho. Manoro anao ny rehetra aho. Enga anie ianao hahita fahombiazana hatrany.
Ankara, Torkia 29 Jan, 2019
Nety tsara ilay izy! Ny teniko rehetra sy ny angon-drakoko (mety ho sarotra loatra) dia niverina indray! MISAOTRA ANAO!! Nandritra ny fahavaratra dia nanana fotoana malalaka aho hiasa amin'ny zavatra, fa izahay kosatarmiverina any am-pianarana tsy ho ela ary variana amin'ny asa ara-batana kokoa aho noho ny asan'ny solosaina, ary TSY nanana fotoana (na foko) hipetrahana aho ary hiditra indray amin'ny fitenenana biolojika sy valopolo sy biolojika, famaritana ary andinin-tsoratra masina! Narary ara-bakiteny teo amin'ny vavoniko aho tamin'ilay fanantenana.
Manantena aho fa manana fitsaharana mahafinaritra amin'ny herinandro ianao, ary faran'ny herinandro fitsaharana sy mahafinaritra!
Brownwood, Texas, Etazonia 13 Aogositra 2014
Vancouver Avaratra, BC, Kanada 1 Novambra 2015
Houston, TX, Etazonia Novambra 1st, 2015
Ny fitaovana fanamboarana Excel dia afaka naka ny angon-drakitra an-tsoratra rehetra avy amin'ny rakitra Excel 2 simba izay misokatra sy voatahiry rehefa nianjera tamin'ny PC aho. Saingy, ny fitaovana dia tsy afaka naka ny zava-drehetra tamin'ny endrika rehetra (sahisahy, loko sns) lost miaraka amin'ny antsasaky ny raikipohy (indrindra ireo manahirana mampifandray ny takelaka amin'ny togther). Raha misy ny olana mety hitranga, ny fitaovana dia manapaka takelaka efa misy ho ravina fanampiny mba hahafantaranao hoe aiza no hijerena ny fatiantoka - hevitra tsara. Valiny nahatsiravina tamin'ny ankapobeny satria ny angona no ampahany sarotra haverina tamin'ny laoniny avy tamin'ny loharano voalohany. Ny iray amin'ireo fisie dia nofofoina mafy ka tsy azo nalaina tahaka, nosokafana (na voafafa mihitsy!) Tamin'ny programa MS rehetra! Tamin'ny ankapobeny dia namonjy ahy nandritra ny herinandro ny fitaovana. Tsy ampy iray andro akory vao tafaverina amin'ny laoniny ny fisie amin'ny alàlan'ny famerimberenana ny fandefasana azy amin'ny kinova fisie taloha kokoa ary zahao ny angona. Fanamarihana ho an'ireo mpampiasa, raha toa ka nijanona ilay fitaovana, manam-paharetana, naharitra adiny iray teo ho eo ny famahana ilay rakitra sarotra kokoa talohan'ny starTed manao anythin
Melbourne, Aostralia 1 Jan 2017
Ny Disk Image dia nihoatra ny fandaharana matihanina telo hafa izay tsy nahavita namorona sarina rafitra ISO - io dia niasa lavorary. Na dia tsy azo alefa amin'ny USB aza izy io ary tsy maintsy ampandehanana avy amin'ny OS mihazakazaka, haingana dia haingana, 1TB tao anatin'ny 2 ora monja ny fametahana azy, ary namerina tamin'ny laoniny. Momba ny tanjaky ny fahombiazany, ny fahamombanany, ary koa ny fanampiana tsara nomen'izy ireo, azoko atao ny manolotra ny rindrambaiko ho an'izay mila izany.
Wayne Rice nisotro ronono
Bostamin'ny, MA, USA 25 Jan 2017